Flim2MM: Heart ofaDragon (1985)
ဒီဇာတ်ကားက Jackie Chan နဲ့ Sammo Kam-Bo Hung (ဖက်တီးမင်းသား) တို့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Sammo Kam- Bo Hung ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်းဖြစ်တဲ့ အပြင် ဟာသဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် ဖော်ပြနိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့ ရဲစုံထောက်ဖြစ်တဲ့ Ted ဟာ သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့ ရွက်လွှင့်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိပေမယ့် စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ Danny ကို ပြုစုနေရပါတယ်။ Danny ဟာ ရတနာတွေခိုးယူတယ်ဆိုပြီး ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာတော့ Ted ဟာ ကယ်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းနဲ့ ဝေဖန်ရေး တစ်ခုက ပြောထားတာက သူတို့နှစ်ယောက်အတွဲဟာ ဟောင်ကောင် အက်ရှင်ရဲ့ သားကောင်းရတနာတွေဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇာတ်ကားမှာ ညီအစ်ကိုသံယောဇဉ်ကို ဖော်ပြထားပြီး အက်ရှင်ခန်းကို အနည်းငယ်ပဲ ထည့်ထားပါတယ်တဲ့။ ဇာတ်လမ်းစပြီး မိနစ် ၅၀ ကြာမှ အက်ရှင်တိုက်ခိုက်ခန်းတွေကို စမြင်ရပေမယ့် ကြည့်တဲ့သူကို ရယ်မြူးအောင် ကြေကွဲအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား ဒီဇာတ်ကားထဲက Sui Hoh Seung Yi" ('Who Could Be Dependent') ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးက ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်သီချင်းဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
FORMAT]:………………………….:) BluRay / 720p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Comedy, Crime
[FILE SIZE]:…………………….….:) 814 MB
[Translate By]:……………………..:) လယ်ဝေးသားလေး Kyaw Myo Thu
Posted by Y Junction at 5:34:00 AM
komyint oo August 3, 2017 at 4:24 PM
ကျေးဇူးပြုပြီး open load ဖြင့် တင်ပေးပါလားခင်ဗျား